Google Earth bụ sọftụwia nke gbanwere ụzọ anyị si ahụ ụwa. Ahụmahụ nke gbara gburugburu mgbe ọ bụla ma n'akụkụ ọ bụla nke ụwa, dịka a ga - asị na anyị nọ ebe ahụ. Nke a bụ usoro pụrụ iche, site na ntọala nke igodo gaa na nleta nleta ...
Usoro - LandWorks Usoro Google Earth Google Earth
Kemgbe iwebata ya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, geolocation abụrụla echiche ejiji, ebe a na-ahụta ya dị ka otu isi uru nke ngwaọrụ mkpanaka, ma e jiri ya tụnyere PC, n'echiche nke ndị mgbasa ozi. Agbanyeghị, a na-atụle okwu nzuzo nke, dị ka ụfọdụ si kwuo, bụ ...
QGIS ngosi data na Google Earth
GEarthView bụ ngwa mgbakwunye dị mkpa na-enye gị ohere ịmekọrịta mmekọrịta nke mkpokọta GIS kwantum na Google Earth. Etu esi wụnye ngwa mgbakwunye Iji tinye ya, họrọ: Add-ons> Jikwaa mgbakwunye ma chọọ ya, dị ka eserese ahụ. Ozugbo ngwa mgbakwunye arụnyere, ọ ga-elele na toolbar.…